Adeegyada - Shenzhen OTAO Technology Co., Ltd.
OEM / ODM ee Macaamiisha Brand
OTAO waxay leedahay warshad 12000sqm ah, 200 + shaqaale, iyo boqolaal mishiinno sax ah. Waxsoosaarka saxda ah ee waxsoosaarka saxda ah ee ay xaqiijiyeen BV, SGS, ISO, iwm si loo damaanad qaado tayada loona hubiyo in lagu bixiyo waqtiga.
OTAO waxay u adeegtay 300 + macaamiisha sumadda OEM leh khibrado hodan ah iyo caddayn tayo leh, oo la siiyay adeegga la xiriira ee baahida isu dhigma, qaabeynta, xalka, qiimaha, wax soo saarka, dhoofinta, suuqgeynta, iyo taageerada iibka kadib.
Macaamiisha Brand OEM
dalalka iyo aagga
Loo habeeyay cabirro ama qalab kala duwan oo loogu talagalay shuruudaha macaamiisha qalabka, sida mobilada, kiniiniga, Kaamerada, Baabuurka, qalabka guryaha, iyo mashiinada warshadaha ...
Bixinta xalalka wax soo saarka si loo gaaro shuruudaha tayada iyo miisaaniyadda, ka caawi macmiilkeena inuu dhiso astaanta, qiimaha, iyo tartamada kala duwanaanta alaabada, iwm.
OTAO waxay aasaastay hal SOP oo buuxa iyo TQM oo ah xakamaynta tayada si loo hubiyo alaab kasta oo ceyriin ah, habraac, iyo wax soo saar ah, iyadoo la hubinayo in lagu bixiyo waqtiga, lana damaanad qaado tayada wax soo saar kasta.
Gaar ahaan OTAO waxay khibrad u leedahay dhisida astaan ​​lahaansho iyo u adeegida macaamiil magac leh, OTAO waxay si sax ah isugu soo uruurisay mashiinada wax soo saarka iyo qalab buuxa oo mashiin tijaabo ah nidaam kasta, isla mar ahaantaana, fidinta kooxda QC, hagaajinaysa nidaam kasta, kuna dartay habab badan si ay ugu qalanto.
Lahaanshaha kooxda R&D / Shaybaarka guriga iyo qalabka si ay u sii wadaan bixinta xalal cusub oo horumarsan oo ay la shaqeeyeen shirkadaha Japan, Kuuriya iyo Shiinaha si ay R&D u helaan qalab cusub oo loogu talagalay ilaalinta shaashadda.
Hormarinta nidaamka joogtada ah iyo hagaajinta waxay wax weyn ka bedelaysaa alaabada si ay uga caawiso macmiilkeena inuu gaaro tartan badan wuxuuna bilaabi doonaa waxyaabo cusub bil kasta si macaamilkeenu ugu dhiirrigeliyo waxyaabaha cusub macaamiishooda.
Ka soo qaybgal bandhigyo badan iyo warbaahinta bulshada si aad u faafiso sumadda oo aad u bixiso cunsurro xayeysiis la xiriira iyo feylal aad ku caawiso
Waxaan soo ururin doonnaa dhammaan mobilada iyo aaladaha, oo lagu bilaabi doono astaamo sanadaha, oo aan horumarin doonno ilaaliyaha shaashadda la xiriira ee hormaray 3-4month, ka dib isbeddellada suuqgeynta. Waxaan kugula talin doonnaa alaabada kulul si waafaqsan.
Waxaan ku guuleysaneynaa tiro badan oo macaamiil ah iyo faallooyin aan ku hagaajineyno soo saarkeena iyo horumarinteena.